El Monte de las Ánimas, iyo yakasarudzika kutya kwaGustavo Adolfo Bécker | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Nyaya, Zvinotyisa
Gomo remweya ndeimwe yenyaya dziri chikamu che Soria, muunganidzwa wemunyori wechiSpanish Gustavo Adolfo Bécquer. Iyi Gothic inotyisa ngano yakaburitswa munaNovember 7, 1861 mupepanhau Chazvino pamwe nedzimwe nyaya gumi nenhanhatu. Basa rakakamurwa kuita pfupi sumo, zvikamu zvitatu uye epilogue apo munyori anowedzera ruzivo rutsva kunyaya.
Iyo inotaura nezve zvisirizvo zvakaitwa naAlonso, muvhimi wechidiki ane hunhu husina mhosva , que inogutsikana nyore nehama yake Beatriz kuenda kuGomo reMweya panguva yehusiku hweZuva revakafa. Iyi ndiyo nzvimbo inokodzera kushanyira pakati pevatsvene vese.
1.2 Pakati peNgano neRhymes
2 Kuongorora kweEl Monte de las Ánimas
2.1.3 Vatambi vechipiri
2.2 Legend Pfupiso
Akabhabhatidzirwa pasi pezita raGustavo Adolfo Domínguez Bastida, akaberekwa musi waFebruary 17, 1836 muSeville, Spain. Baba vake, Don José Domínguez Bécquer, uye nemadzikoma ake vaive vapendi vane mukurumbira. Mumuzinda weAndalusia akapedza hudiki hwake uye kuyaruka; imomo akadzidza vanhu uye kupenda. Akasiiwa pasi pekudzidziswa nababamunini vake, Joaquín Domínguez Bécquer, mushure mekuve nherera pazera regumi nerimwe.
Asati ave murume wetsamba, akatamira kuMadrid muna 1854, kwaakashanda semutori wenhau uye kugadzirisa mitambo yekune dzimwe nyika. Muna 1958, panguva yekugara mutaundi rekumusha kwake, akarwara zvakanyanya uye aifanira kupedza mwedzi mipfumbamwe pamubhedha nekuda kwechirwere chakakomba. Parizvino, vanyori venhoroondo havabvumirane nezvehunhu hwechirwere (pakati peTB uye syphilis).
Munun'una wake Valeriano akamuchengeta uye akamubatsira kutsikisa ngano yake yekutanga: Chinda nemaoko matsvuku. Munguva iyoyo akasanganawo naJulia Espín, akasarudzwa nevadzidzi vazhinji seyeyeyeuchidzo yake Rhymes. Vamwe vakafunga kuti aive Elisa Guillén akamukurudzira. Muna 1861 akaroora Casta Esteban, mwanasikana wechiremba. Kunyangwe yaive isiri imba inofara, vaive nevana vatatu.
Pindai Ngano y Rhymes
Hafu yekutanga yema1860 yaive mwaka wayo wekubereka kwazvo mune zvinyorwa zvinyorwa zveGustavo Adolfo Bécquer. Kwete pasina chaakanyora mazhinji ake Ngano panguva iyi. Saizvozvo, akashanda mukuwedzeredzwa kwemanyori enhoroondo uye akatanga chinyorwa chake che Rhymes. Muna 1866 akave anoongorora zviri pamutemo enoveli, nekudaro, aikwanisa kutarisisa zvakanyanya pamashoko ake ega.
Shanduko ya1868 yakaita kuti arasikirwe nebasa uye mukadzi wake akamusiya.. Nekudaro, akatamira kuToledo nemukoma wake uyezve kuguta guru reSpain. Ikoko akatungamira magazini Kujekerwa kweMadrid (mukoma wake aishanda semufananidzo). Rufu rwaValeriano munaGunyana 1870 rwakamupinza mukushushikana kwakadzika. Gustavo Adolfo Bécquer akashaya mwedzi mitatu gare gare.
Gustavo Adolfo Becquer iye ari - pamwe naRosalía de Castro - anofungidzirwa semumiriri mukuru wepamberi-rerudo lyric. Iyo poetic subgenre inosiyaniswa neayo maitiro epedyo uye inoratidzira hunhu hweashoma ekushamisira kutaura kupfuura kudanana. Pamusoro pe, Bécquer yakafurira gare gare maartist makuru, saRubén Darío, Antonio Machado naJuan Ramón Jiménez, pakati pevamwe.
Gomo remweya mukati mawo ibasa rine imwe nhaka. Akaonekwa mune dzakasiyana mimhanzi madhisiki uye opera nevaimbi vakaita saRodríguez Losada, muridzi wemuimbi simbi bhendi "Saurom" neboka rema80s, Gabinete Caligari. Parizvino, kune nzira yevashanyi muSoria yakafemerwa nengano yeBeccquer.
Kuongorora kweEl Monte de las Ánimas
Iye ndiye hama isina ruzivo yeBeatriz. Inoratidza hunhu hwake husina mhosva mushure mekunyengererwa napo kuti aende kunotsvaga ribhoni rebhuruu muMonte de las Ánimas. Dambudziko nderekuti zvaive chaizvo pahusiku hweVatendi Vese, apo mweya yakawanda inotenderera panzvimbo iyi.
Muvhimi uye mugari wenhaka kumuzinda weAlcudiel yaive yechokwadi dhongi mukuisa pangozi dehwe rake nenzira iyi. Kunyanya zvakadaro, kuve neruzivo pamusoro penyaya dzine chekuita nemweya yevaTemplars vakafa muhondo yavo neiyo hidalgos. Alonso vanopedzisira vachipesana nezvavanotenda kuitira kuti vafadze munhu wavanoda.
Jaya rerunako risingadzivisike, asi neine kutonhora uye kuverenga maitiro. Mwanasikana wekuverenga kweBorges akaratidza hudyire hwake paakakumbira hama yake Alonso kuti aende kuMonte de las Ánimas kunotora nguvo yakarasika. Haana kuita hanya kana nepadiki pese nezve mamiriro ezvinhu ehusiku kana njodzi iyo nhengo yemhuri yake yakatizira ikoko.
Beatriz ndiye muenzaniso wechokwadi narcissism. Mukadzi ane hunhu hwakawandisa uye asina hunhu maitiro, akapiwa ungwaru hunouraya hwakakwanisa kupokana naAlonso. Kusvika padanho rakadai, kuti hama yake haina kukwanisa kupikisa chikumbiro chekuenda kunotsvaga hembe pahusiku hune njodzi hwakadai.
Huwandu hwaAlcudiel, vabereki vaAlonso.
Kuverenga kweBorges, vabereki vaBeatriz.
Iwo squire, vavhimi uye vashandi vemuzinda.
Vabatsiri kumuzinda weCounts yeAlcudiel panguva yehusiku hweVose Vasande.
Quote naGustavo Adolfo Bécquer.
Alonso ainyatsoziva ngano yeMonte de las Ánimas. Pakati pezuva rekuvhima nevana uye mapeji eLos Condes de Borges naAlcudiel, akavaudza nyaya nezve maTempars vaitonga gomo. Vaive varwi uye vanonamata vakafira ipapo mumaoko evarwi vaMambo weCastile mambo pavakafunga kudzinga maArabu muguta reSoria.
Sekureva kwenhema, mweya yevaTemplars yakavigwa munzvimbo iyi yakabuda kunochengetedza gomo pamwe chete nemhuka panguva yehusiku hweVose Vasande. Neichi chikonzero, hapana munhu ane pfungwa dzakanaka akasvika padyo negomo iro panguva yemafaro iwayo.
Panguva yekudya kwemanheru pamuzinda weCounts yeAlcudiel, Alonso naBeatriz vakasara vachitaura nenzvimbo yemoto. Iye anoudza hama yake kuti achange achienda nekukurumidza uye anoshuvira kumupa chishongo seyeuchidzo. Anogamuchira chipo, kunyangwe achizeza kutanga. Asi Alonso anoda kutora chiyeuchidzo kubva kuhama yake futi.
Beatriz anomuudza kuti achamupa ribhoni rebhuruu. Nekudaro, iyo nguvo yakarasika muMonte de las Ánimas. Ipapo, anoshandisa kupenga kwake kubvunza hushingi hwaAlonso uye anoita zvisina basa. In consecuense, anosarudza kudaro ratidza kukosha kwako nekuenda kunotora chisungo chehama yako… Zvese kuitira kuti afare.
Beatriz akaomerwa nekurara husiku ihwohwo. Pakutanga akafunga kuti akawedzeredza nekutya uye nekunamata kakawanda nekuda kwehope dzaakatambura. Asi chinhu chinovhiringidza chinozorora patafura mukamuri rake: ribhoni reropa reropa. Kana muranda waBorges aenda kunomupa nhau dzekufa kwaAlonso nekuda kwemhumhi, Beatriz anowanikwa akafa.
Imwe nguva mushure mezvakaitika, muvhimi aive husiku humwe muMonte de las Ánimas. Asati afa, murume uyu akataura kuti akaona mafupa ema Templars achibuda uye nemaSorian anokudzwa akavigwa ipapo. Uye zvakare, iye akaona chimiro chemukadzi akanaka akashatiswa ane tsoka dzeropa, achifamba akatenderera guva raAlonso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nyaya » Gomo remweya
Mamita maviri kubva kwauri